गोपनीयता - तपाईंको YouTube भिडियो वा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टहरूको लागि निःशुल्क संगीत र मिडिया डाउनलोडहरू
सर्भर PetrPikora.com को एचएसटीएस टेक्नोलोजी (एचटीटीपी स्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटीज) को उपयोग को सबै भन्दा महत्वपूर्ण छ। HTTP सख्त यातायात सुरक्षा (HSTS) एक सूचना प्रणाली को रूप मा, यो एक वेब साइट को एक वेब सर्भर को रूप मा एक उच्च गुणवत्ता को एक उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शन गर्न को लागि यस कम्पैक्ट डिस्क प्रोमोशनल (tzv। कुकीज हिजाकिंग)। मंत्रिमंडल इमोज़ा, आफ्नो वेब साइट सर्भर र एक प्रोटीन को उपयोग को लागि एक उच्च गति को उपयोग गर्न को लागि एचटीटीपी एचटीटीपी प्रोटोकॉल को एचआईवीपी प्रोटोकॉल को एक प्रोटीन छ। HSTS RFC 6797 को परिभाषित गर्दछ। वेबवेज सर्भर एचटीएसपी एचएमटीपी hlavičky सशस्त्र-यातायात-सुरक्षा, यदि तपाईं कुनै पनि समस्या को रूप मा देख सकते हो, यो तपाईंको वेब सर्भर को उपयोग गर्न को लागी छ। एचएसटीएस पाम्बान क्रोनाइट वेबवेज प्रोटोनियम प्रोटीन पेसिन्नम (डिस्पोजेक्ट) एक एक्टिभ्नियम síťovým útokům। यस एचएसटीएस मंत्रिमंडल मा एक útočník, कोट विडियो मनुष्य को भित्र मध्य मध्य, यस स्तरीय शहर को, यो अजीब शहर को एक शब्दावली को रूप मा मेजर माईजी को एक वेबव्यापी अनुप्रयोग। आफ्नो मित्र को पठा्नुहोस!
हाम्रो वेबसाइट तपाईंको भ्रमण बारे निम्न जानकारी भेला:
जानकारी, कटर जेएसओ nepovinnéajenž uživatelé poskytují dobrovolně। Jedná se o jmno, případně přezdívku, e-mail, adresu web site stránky। सबै भन्दा पहिले को सबै भन्दा राम्रो छ कि तपाईं को बारे मा सूचित गर्न को लागि को रूप मा, यस प्रकार को सबै भन्दा राम्रो कोठा को एक विस्तृत विविधता को रूप मा।
Passively जानकारी संकलन (अर्थात्। तपाईं सक्रिय जानकारी प्रदान बिना प्राप्त) इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना, कुकीहरू, अरूलाई इन्टरनेट टैग रूपमा विभिन्न प्रविधिहरू र साधन, प्रयोग। यो जानकारी हाम्रो प्रयोगकर्ता राम्रो दर्जी सामग्री अनुमति दिन्छ र विज्ञापनदाताहरु र प्रायोजकहरूको राम्रो हाम्रो आगंतुकों बुझ्न मदत गर्नेछ ।
यस वेबकैम को उपयोग गर्न को लागी एक पुनर्विक्रय पोजीवोवनी रिक्मनीमी společnostmi छ। Tyto Společnosti मोहम्मद प्यूरिवेट (यदि तपाईं को लागी, तपाईं एक टेलीफोनी फोन को एक इमेल मा भेज दिए छ) र यस वेब साइट मा एक वेब साइट मा एक वेब साइट को उपयोग गर्न को लागि कुनै पनि वेब साइट को उपयोग गर्न को लागि।
गूगल, तेस्रो पक्ष विक्रेता रूपमा, यो साइट कुकीहरू विज्ञापन सेवा प्रयोग गर्दछ। डार्ट कुकी यो साइट र इन्टरनेट मा अन्य साइटहरु आफ्नो भ्रमणमा आधारित प्रयोगकर्तालाई Google विज्ञापन सेवा गर्न सक्छन् सक्षम बनाउँछ।
Uživatelé se mohou po přečtení विज्ञापन र Google नेटवर्क लागि गोपनीयता नीति z používání souborů कुकी DART सदस्यता खारेज.
सबैभन्दा ब्राउजरहरूले स्वचालित रूपमा कुकी फाइलहरू स्वीकार गर्न सेट छन्, तर सबै कुकीहरू इन्कार गर्न वा कुकी पठाइएको छ भनी संकेत आफ्नो ब्राउजर सेट गर्न सकिन्छ। आफ्नो कुकीहरू असक्षम छन् भने केही सुविधा र सेवा गुगल राम्ररी काम गर्न सक्छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुहुनेछ गुगल इंक देखि कुकी फाइलहरू इन्कार v Obsahové syti Google Prostřednictvím डबल क्लिक कुकीहरू इन्कार.
विज्ञापन कुकी-अप्ट आउट प्लगइन स्थायी रूपमा इन्टरनेशनल इन्टरनेट एक्सप्लोररले फायरफक्सको इन्टरनेट एक्सप्लोरर "DoubleClick Cookie" मा अनुवाद गरेको छ, यो प्रयोगकर्ता Googlem प्रो भिडिओनियन एनबीसीटीएनएन र यसको प्रयोग गर्न सक्दछ।
यस खण्डमा, तपाईंले आफ्नो साइटको URL, साथसाथै कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्दछ जुन यस साइट र सही सम्पर्क जानकारी सञ्चालन गर्दछ।
तपाईलाई आवश्यक पर्ने जानकारी रकम युरोपेली वा राज्यका नियम र कानुन अनुसार निर्भर हुनेछ। उदाहरणको लागि, तपाईंलाई भौतिक ठेगाना, कम्पनी परिचय नम्बर प्रदान गर्न आवश्यक छ।
Doporučený text: हाम्रो वेब ठेगाना हो: https://petrpikora.com।
हामीले के सङ्कलन गर्छौँ र किन हामी तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्दछौ
यस खण्डमा, तपाइँ प्रयोगकर्ता र आगन्तुकहरूबाट तपाईले आफ्नो साइटमा सङ्कलन गर्नुभएको कुन व्यक्तिगत जानकारी संकेत गर्नुपर्दछ। यी हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, लेनदेनको डेटा - खरीद जानकारी; प्राविधिक डेटा - कुकी जानकारी; र व्यक्तिगत जानकारी - प्रयोगकर्ता खाता जानकारी र इ-मेल ठेगाना।
तपाईले संवेदनशील व्यक्तिगत डेटाको संग्रह र भण्डारण बारे जानकारी प्रदान गर्नु पर्छ, जस्तै स्वास्थ्य डेटा।
तपाईले सङ्कलन गर्नुभएका व्यक्तिगत जानकारी निर्दिष्ट गर्नुको साथै, तपाइँले सङ्कलन गर्न आवश्यक छ किन तपाईले तिनीहरूलाई इकट्ठा गर्नुहुन्छ। यी व्याख्याहरूले व्यक्तिगत डेटा को संग्रह र अवधारण वा प्रयोगकर्ताको सक्रिय सहमतिको लागि कानुनी आधारमा ध्यान दिनु पर्छ।
व्यक्तिगत जानकारी केवल तपाईंको साइट संग अन्तरक्रिया गरेर सिर्जना गरिएको छैन। व्यक्तिगत डेटा पनि सम्पर्क फारमहरू, टिप्पणीहरू, कुकीजहरू, एनालिटिक्स, र तेस्रो-पक्ष एम्बेडेड डाटा जस्ता प्राविधिक प्रक्रियाहरूबाट उत्पन्न गरिएको छ।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, वर्डप्रेसले आगन्तुकहरूको बारेमा कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी सङ्कलन गर्दैन र दर्ता गरिएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि व्यवस्थापक पृष्ठ "प्रोफाइल" मा प्रदर्शित डेटा मात्र एकत्र गर्दछ। यद्यपि, तपाइँका केही प्लग-इन व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्न सक्दछ। तल तलको सम्बन्धित जानकारी थप गर्नु पर्छ।
यो उपसभापतिमा तपाईले कुन जानकारीलाई टिप्पणी मार्फत रेकर्ड गरिएको छ भनेर संकेत गर्नु पर्छ। तल हामी कुन आधारभूत डेटा वर्डप्रेस सङ्कलन गर्दछ भन्ने जानकारी प्रदान गर्दछौं।
Doporučený text: जब यो साइटले यस साइटमा टिप्पणी गर्दछ, टिप्पणी फारममा प्रदर्शित डेटा, आगन्तुकको IP ठेगाना, र ब्राउजर परिभाषित प्रयोगकर्ता एजेन्ट स्ट्रिंग एकत्रित गरिन्छ, स्प्याम पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाइँ यो सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्धारण गर्नका लागि Gravatar तपाईंको इमेल ठेगाना (ह्याण्डको रूपमा चिनिन्छ) बाट सिर्जना गरिएको अज्ञात स्ट्रिङ प्रदान गरिएको हुन सक्छ। Gravatar गोपनीयता नीति यहाँ उपलब्ध छ: https://automattic.com/privacy/। एक पटक तपाईंको टिप्पणी अनुमोदित भएपछि, तपाईंको प्रोफाईल छवि तपाईंको टिप्पणीको सन्दर्भमा सार्वजनिक देखिने छ।
यस उपन्यासमा, तपाइँले निर्दिष्ट गर्न मिल्ने फाइलहरू मिडिया फाइलहरू अपलोड गर्न सक्ने प्रयोगकर्ताहरूमा प्रकाशित हुन सक्दछ। सबै अपलोड गरिएका फाइलहरू सामान्यतया सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्।
Doporučený text: यदि तपाइँ यस साइटमा छविहरू अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ छविहरू अपलोड गर्नबाट इम्बेड गरिएको स्थान डाटा (EXIF जीपीएस) बाट टाढा राख्न सक्नु हुन्छ। साइट आगन्तुकले वेबमा कुनै पनि स्थान डेटा छविमा डाउनलोड गर्न र हेर्न सक्दछ।
वर्डप्रेसले पूर्वनिर्धारित रूपमा सम्पर्क फारमहरू समावेश गर्दैन। यदि तपाईं एक सम्पर्क प्लग-इन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने कुन डेटा व्यक्तिगत रूपमा रेकर्ड गरिन्छ जब तपाइँले सम्पर्क जानकारी पठाउनुहुन्छ र तपाइँ कति चोटि जानकारी भण्डारण गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं संकेत गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाइँ ग्राहक सेवा उद्देश्यका लागि सम्पर्क फारम द्वारा प्राप्त भएको जानकारी भण्डारण गर्नुहुन्छ, तर तपाईले यो जानकारी मार्केटिङ उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुहुन्न।
यो उपसभापतिमा तपाईले कुन कुकुरले तपाईको साइटलाई प्रयोग गर्दछ भनेर संकेत पुर्याउनुपर्दछ, जसमा तपाइँका प्लगइनहरू, सोशल मिडिया र एनालिटिक्सहरू सिर्जना गर्नेहरू सहित। तल कुकीहरू जुन WordPress द्वारा डिफल्ट रूपमा स्थापित गरिएको छ।
Doporučený text: यदि तपाइँ हाम्रो साइटमा टिप्पणी थप्नुहुन्छ भने, तपाइँले हामीलाई आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना र कुकीजमा वेबसाइट बचत गर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। यस तरिकामा, हामी नयाँ टिप्पणी लेख्दा हामी सान्त्वना बढाउने प्रयास गर्छौं, त्यसैले तपाईंलाई यसलाई भर्न हुँदैन। यो कुकीजहरू एक वर्ष लामो हुनेछ।
यदि तपाइँसँग एक खाता छ र यो साइटमा साइन इन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको ब्राउजर कुकीज प्राप्त गर्दै प्रमाणित गर्नका लागि अस्थायी कुकी सेट गर्नुहोस्। यो कुकीले कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा समावेश गर्दैन र ब्राउजर बन्द भएपछि रद्द गरिनेछ।
जब लगइन गर्दा, हामीले तपाइँको लग इन जानकारी भण्डार गर्न र पर्दा प्रदर्शन सेट गर्नका लागि धेरै कुकीजहरू सेट अप गर्यौं। लग गरिएको कुकीजहरू दुई दिनको जीवनकालमा छन्, र सेटिङहरू कुकीहरू गत एक वर्ष प्रदर्शन गर्दछ। यदि तपाइँ "मलाई सम्झनुहोस्" विकल्प पुष्टि गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको लगइन दुई हप्ता लागु हुनेछ। यदि तपाइँ आफ्नो खाताबाट साइन आउट गर्नुहुन्छ भने लगइन कुकीहरू हटाइने छ।
यदि तपाइँ एक लेख सम्पादन वा प्रकाशित गर्नुहुन्छ, अर्को कुकी तपाईको ब्राउजरमा भण्डार गरिनेछ। यो कुकीले कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा समावेश गर्दैन र तपाइँले भर्खरै सम्पादन गर्नुभएको पोष्ट आइडीलाई संकेत गर्दछ। यसको वैधता 1 दिन पछि समाप्त हुन्छ।
अन्य साइटहरूबाट सम्मिलित सामग्री
Doporučený text: यस साइटमा पोष्टहरू समावेश गरिएको सामग्री समावेश हुन सक्छ (उदाहरणका लागि, भिडियो, तस्वीरहरू, लेखहरू, आदि)। अन्य वेबसाइटहरूबाट इम्बेड गरिएको सामग्री त्यहि तरिकाले व्यवहार गर्दछ जुन यदि आगन्तुकले अर्को साइटमा भ्रमण गर्यो।
यी वेबसाइटहरूमा जानकारी अतिरिक्त तेस्रो-पक्ष ट्रयाकिङ राख्दै, कुकीहरू प्रयोग तपाईँले सङ्कलन र आफ्नो अन्तरक्रिया एउटा खाता छ र वेबसाइट मा लग इन हुनुहुन्छ भने, यो सम्मिलित सामग्री ट्रयाक इमबेट सामग्री संग अन्तरक्रिया को ट्रयाकिङ सहित सक्छ।
यो उपखण्ड, तपाईंले प्रयोगकर्ता ट्रयाकिङ बाहिर कसरी रोज्न सक्नुहुन्छ, र पनि विश्लेषणात्मक सेवाहरू आफ्नो प्रदायक द्वारा प्रदान गोपनीयता नीति एउटा लिङ्क प्रदान गर्नुपर्छ, जुन विश्लेषणात्मक उपकरण तपाईंले प्रयोग संकेत गर्नुपर्छ।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, वर्डप्रेस कुनै पनि विश्लेषणात्मक डेटा संकलन गर्दैन। यद्यपि, धेरै होस्टिङ खाताहरूले केही अज्ञात डाटा सङ्कलन गर्छन्। तपाइँ पनि WordPress प्लगइन स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ जसले विश्लेषण सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यस अवस्थामा, यस प्लगइनबाट यहाँ जानकारी थप्नुहोस्।
जसको साथ हामी तपाईको डेटा साझा गर्छौं
यस खण्डमा तपाईं कुन जानकारी उनीहरूसँग र किन साझेदारी निर्दिष्ट, नाम र तपाईं साझेदार, क्लाउड सेवा, भुक्तान gateways र तेस्रो-पक्ष सेवा प्रदायकको सहित एक वेब डाटा, साझेदारी कोसँग सबै तेस्रो-पक्ष प्रदायकहरू सूची प्रदान गर्नुपर्छ साथ। यदि सम्भव छ भने, कृपया आफ्नो गोपनीयता नीति लिङ्क प्रदान गर्नुहोस्।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, वर्डप्रेसले कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्दैन।
कति लामो समय हामी तपाईंको डेटा राख्छौं?
यस खण्डमा, तपाइँले यस साइट द्वारा तपाईले व्यक्तिगत डेटा एकत्रित वा प्रशोधन गर्नु भएको कति लामो समयको व्याख्या गर्नु पर्छ। जब तपाइँलाई एक तालिका हुन आवश्यक छ, तपाईं कति डेटासेट भण्डारण गर्नुहुन्छ र तपाइँले यसलाई किन राख्नुहुन्छ भन्ने जानकारीको साथ, यो जानकारी यहाँ सूचीबद्ध नहुन सक्छ। उदाहरणको लागि, तपाईं संकेत गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईं आफ्नो संपर्क फारम को छ महिना को लागि रेकर्ड, एक साल को लागि विश्लेषणात्मक डेटा, र ग्राहक को दस साल को लागि रेकर्ड को रेकर्ड राख्नुहोस।
Doporučený text: यदि तपाइँ टिप्पणी थप्नुहुन्छ भने, टिप्पणी र यसको मेटाडेटा अनिश्चितकालीन रूपमा राखिने छ। डेटा स्वचालित रूपमा पहिचान गर्न र पछिल्ला टिप्पणीहरूको अनुमोदन को उद्देश्य को लागि भण्डारण गरिएको छ किनकि तिनीहरूलाई मध्यस्थता लाममा राख्नु पर्दछ।
यस साइटमा साइन अप गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि (यदि तिनीहरूसँग यो विकल्प छ), हामी पनि व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण गर्छौं जुन तिनीहरूका प्रयोगकर्ता प्रोफाइलमा प्रदान गर्दछौं। सबै प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी कुनैपनि समयमा हेर्न, सम्पादन गर्न वा मेटाउन सक्दछ (बाहेक उनीहरूले उनीहरूको प्रयोगकर्तानाम परिवर्तन गर्न सक्दैनन्)। वेबमास्टर्सहरूले पनि यो जानकारी हेर्न र सम्पादन गर्न सक्छन्।
तिम्रो अधिकार के हो?
यस खण्डमा, तपाइँले कुन अधिकार अधिकार प्रयोगकर्ताहरूसँग तिनीहरूको डेटा र कसरी अपील गर्न सक्नुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्नु पर्छ।
Doporučený text: यदि तपाइँसँग यस साइटमा एक खाता छ वा यहाँ टिप्पणीहरू थपेका छन् भने, तपाईंले व्यक्तिगत डेटा निर्यातको साथ हामीले अनुरोध गर्नुहुने छ जुन तपाइँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको जानकारी सहित फाइल अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले तपाइँलाई राख्नुभएको कुनैपनि व्यक्तिगत डेटा हटाउन पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यो विकल्पले डाटा समावेश गर्दैन जुन हामीले प्रशासनिक, कानुनी वा सुरक्षा कारणहरूको लागि राख्न आवश्यक छ।
तपाई आफ्नो डेटा कहाँ पठाउनुहुन्छ?
यो खण्डले युरोपेली संघ बाहिर तपाईको साइटको बारेमा डेटाको सबै स्थानान्तरण सूचीबद्ध गर्नुपर्छ र वर्णन गर्नुहोस् कि यी डेटा युरोपेली गोपनीयताको स्तरहरूद्वारा कसरी संरक्षित छन्। यस सेक्शनमा तपाईंको वेब होस्टिंग, क्लाउड स्टोरेज, वा अन्य तेस्रो पक्ष सेवाहरू समावेश हुन सक्छ।
युरोपेली डाटा सुरक्षा व्यवस्था डाटा युरोप मा आधारित थिए भने जस्तै नियम र कानून द्वारा सुरक्षित युरोपेली संघ बाहिर हस्तान्तरण छन् भनेर युरोपेली जनसंख्या बारेमा जानकारी आवश्यक छ। त्यसैले, स्थान डाटा राख्दै बाहेक, तपाईंले यस्तो मोडेल अनुबंध को गोपनीयता सुरक्षा क्लाज वा बाध्यकारी कर्पोरेट नियम रूपमा एउटा सम्झौता कि बिना, यी स्तर पूरा सुनिश्चित कसरी या त तपाईं वा तेस्रो पक्षहरूबाट वर्णन गर्नुपर्छ ।
Doporučený text: आगन्तुकको टिप्पणी स्वचालित स्प्याम पहिचान सेवा मार्फत स्क्यान गर्न सकिन्छ जुन विदेशमा स्थित हुन सक्छ।
यो खण्डमा, तपाइँले गोपनीयता चिन्ताको लागि सम्पर्क विधि प्रदान गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंलाई एजेन्ट हुन आवश्यक छ भने, कृपया उनीहरूको नाम र पूर्ण सम्पर्क विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्।
यदि तपाईं व्यवसायिक उद्देश्यहरूको लागि वेबसाइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र अधिक जटिल संग्रह वा व्यक्तिगत जानकारीको प्रशोधनमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाइँले तपाइँका नीतिहरूमा निम्न जानकारी पनि प्रदान गर्नुपर्दछ।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कसरी सुरक्षित गर्छौं
यो खण्डमा, तपाईंले प्रयोगकर्ता डाटाको सुरक्षा गर्न कस्ता कदमहरू व्याख्या गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं टेक्निकल उपायहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै: इन्क्रिप्सन; सुरक्षा उपायहरू जस्तै बहु-कारक प्रमाणिकरण; र अन्य डेटा जस्तै व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा क्षेत्र मा कर्मचारी प्रशिक्षण। यदि तपाईंले एक गोपनीयता प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भने, तपाईं यसलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ।
जानकारी को रिसाव को लागी प्रक्रियाहरु के हो?
यस खण्डमा, तपाइँले डेटा रिसार्जसँग सम्झौता गर्ने कुन प्रक्रियाहरू उपलब्ध गराउनुपर्दछ, चाहे सम्भव वा वास्तविक हो, जस्तै आन्तरिक रिपोर्टिङ प्रणाली, सम्पर्क प्रणाली, वा इनाम पुरस्कार।
कुन तेस्रो पार्टी हामी व्यक्तिगत डेटा एकत्रित गर्दैछौँ?
यदि तपाईंको साइटले विज्ञापनदाताहरू सहित तृतीय-पक्ष प्रयोगकर्ता डेटा प्राप्त गर्दछ भने, यो जानकारी तपाइँको गोपनीयता सूचनाको खण्डमा समावेश हुनुपर्छ जुन तेस्रो-पक्ष जानकारीसँग सम्बन्धित छ।
हामीले स्वचालित बनाएको निर्णय र / वा प्रोफाइल प्रयोगकर्ता डेटा
तपाईंले यी प्रक्रियाहरू राख्न, र यो जानकारी कसरी प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरूले के यी थपिन डाटा गर्न निर्णय गरे कुन र अधिकार मा जानकारी समावेश - उदाहरणका लागि, ग्राहकहरु क्रेडिट लागू वा विज्ञापन प्रोफाइल डेटा सङ्कलन गर्न अनुमति - यदि तपाईंको स्वचालित निर्णय समावेश सेवाहरू प्रदान मानव हस्तक्षेप बिना निर्णय को प्रयोगकर्ताहरू।
विनियमित उद्योगको जानकारी दायित्व
यदि तपाईं विनियमित उद्योगको सदस्य हुनुहुन्छ वा तपाईं अन्य गोपनीयता कानुनको अधीनमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ।
PetrPikora.com लागि गोपनीयता नीति
तपाईं कुनै पनि थप जानकारी आवश्यक वा हाम्रो गोपनीयता नीति बारे कुनै प्रश्न छ भने, कृपया मा इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस गोपनीयता.
www.PetrPikora.com मा हामी हाम्रो पर्यटकहरू गोपनीयता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ। यस गोपनीयता नीति कागजात विस्तार व्यक्तिगत सूचना को प्रकार एकत्रित र द्वारा www.PetrPikora.com र हामी कसरी यसको प्रयोग रेकर्ड छ वर्णन गर्दछ।
धेरै अन्य वेब साइटहरु जस्तै, www.PetrPikora.com लग फाइलहरू प्रयोग बनाउँछ। सेवा प्रदायक कम्पनीहरु लागि सामान्यतया एक मानक प्रक्रिया र सेवाहरू गरेको विश्लेषण होस्टिंग को एक भाग - यी फाइलहरू Merel साइट आगन्तुकहरूलाई लग। लग फाइलहरू भित्र जानकारी इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगाना, ब्राउजर प्रकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP), मिति / समय टिकट, सङ्केत गर्दै / निस्कनुहोस् पृष्ठ, र संभवतः क्लिक को संख्या समावेश छ। यो जानकारी प्रयोग गरिएको छ, रुझान विश्लेषण साइट, साइट वरिपरि ट्रयाक प्रयोगकर्ताको आन्दोलन प्रशासन र डेमोग्राफिक जानकारी भेला हुन्छन्। IP ठेगाना, भोकमरी र अन्य जानकारी व्यक्तिगत पहिचान छ त्यो कुनै पनि जानकारी गरिएका छैनन्।
www.PetrPikora.com 'साइट आगन्तुक accesses वा भ्रमणमा कुन पृष्ठहरूमा रेकर्ड प्रयोगकर्ता विशेष जानकारी, प्राथमिकता, र व्यक्तिगत वा मा आगंतुकों हाम्रो वेब पेज सामग्री अनुकूलन गर्न' आगंतुकों बारेमा जानकारी भण्डारण गर्न ब्राउजर प्रकार वा अन्य जानकारी त्यो कुकीहरू प्रयोग को आगन्तुक तिनीहरूको ब्राउजर मार्फत पठाउँछ।
→ Google, तेस्रो पार्टी विक्रेताको रूपमा, www.PetrPikora.com मा विज्ञापनहरू सेवा गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ।
→ Google को DART कुकीको प्रयोगले यसलाई हाम्रो साइटका आगन्तुकहरूमा www.PetrPikora.com र इन्टरनेटमा अन्य साइटहरूमा आधारित विज्ञापनहरूको सेवा गर्न अनुमति दिन्छ।
→ प्रयोगकर्ता निम्न URL मा गुगल विज्ञापन र सामाग्री नेटवर्क गोपनीयता नीति भ्रमण डार्ट कुकी प्रयोग अप्ट आउट गर्न सक्छ - http://www.google.com/privacy_ads.html
हाम्रो विज्ञापन भागीदार
हाम्रो विज्ञापन साझेदार केही हाम्रो साइटमा कुकीहरू र वेब बिकनहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। हाम्रो विज्ञापन साझेदार समावेश .......
प्रत्येक यी विज्ञापन साझेदार आफ्नो साइट आफ्नै गोपनीयता नीति छ, जबकि, अद्यावधिक र हाइपरलिङ्क स्रोत यहाँ कायम छ: गोपनीयता नीतिहरू.
तपाईंले गोपनीयता नीति www.PetrPikora.com को विज्ञापन साझेदार प्रत्येक लागि हो पत्ता लगाउन यो सूचीकरण परामर्श सक्छ।
www.PetrPikora.com तेस्रो-पक्ष विज्ञापनदाता द्वारा प्रयोग गरिन्छ त्यो कुकीहरू प्रस्ताव माथि कुनै पहुँच वा नियन्त्रण छ।
तपाईं तिनीहरूको अभ्यासहरू मा साथै अप्ट-आउट गर्न कसरी केही अभ्यासहरू को बारेमा निर्देशनहरूको लागि सम्बन्धित गोपनीयता यी तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भर को अधिक विस्तृत जानकारी को लागि नीति परामर्श गर्नुपर्छ। www.PetrPikora.com गोपनीयता नीति लागू हुँदैन, र हामी, भोकमरी वा अन्य विज्ञापनदाता वेब साइटहरु को गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तपाईं प्रस्ताव गोपनीयता नीति र तिनीहरूको लिंक यहाँ एक व्यापक सूचीकरण पाउन सक्छ: गोपनीयता नीति लिंक.
तपाईं कुकीहरू असक्षम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो ब्राउजर विकल्प मई व्यक्तिगत मार्फत गर्छन। विशिष्ट वेब ब्राउजर संग कुकी व्यवस्थापन बारे विस्तृत जानकारी ब्राउजर 'सम्बन्धित वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ। कुकीहरू के-के हुन्?
हामी विश्वास गर्छौं कि अनलाइन बालबालिकाको लागि थप सुरक्षा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण छ। हामी आमाबाबु र अभिभावकहरुलाई प्रोत्साहन दिनका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्नको लागि, भाग लिन र / वा तिनीहरूको अनलाइन गतिविधिको मार्गदर्शन गर्न र निर्देशन गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं। www.PetrPikora.com जान्दछन् कि 13 उमेर भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु मध्ये कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी एकत्रित गर्दैन। यदि आमाबाबु वा अभिभावकले विश्वास गर्दछ कि www.PetrPikora.com यसको डेटाबेसमा 13 उमेरको उमेर भन्दा कम बच्चाको पहिचान योग्य जानकारी हो, कृपया तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (पहिलो अनुच्छेदमा सम्पर्क प्रयोग गरी) र हामी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयासहरू प्रयोग गर्नेछौं। हाम्रो रेकर्डबाट यो जानकारी तुरुन्तै हटाउन।
यो गोपनीयता नीति मात्र हाम्रो अनलाइन गतिविधिहरु लागि लागू हुन्छ र हाम्रो वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई र साझेदारी सम्बन्धमा जानकारी र / वा त्यहाँ एकत्रित लागि मान्य छ। यो नीति कुनै पनि जानकारी एकत्रित अफलाइन गर्न वा यो वेबसाइट भन्दा अन्य च्यानलहरू मार्फत लागू हुँदैन।
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं एतद्द्वारा हाम्रो गोपनीयता नीति सहमति र यसका सर्तहरू सँग सहमत हुनुहुन्छ।
यो गोपनीयता नीति अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको थियो: आइतबार, अगस्त 27th, 2017।
हामी, अद्यावधिक गर्नुपर्छ संशोधन वा हाम्रो गोपनीयता नीति कुनै पनि परिवर्तन, ती परिवर्तनहरू यहाँ पोस्ट गरिनेछ।
यो नमूना भाषाले मूल डेटा समावेश गर्दछ जुन तपाईंको व्यक्तिगत भण्डार तपाईंको भण्डारण, भण्डारण गर्न र साझेदारी गर्न सकिन्छ साथै साथै जुन डेटासँग पहुँच हुन सक्छ। कुन सेटिङहरूमा सक्षम छ र कुन अतिरिक्त प्लगइनहरू प्रयोग गरिन्छ, तपाईंको स्टोरद्वारा साझा गरिएको विशिष्ट जानकारी फरक हुनेछ। हामी तपाईंको गोपनीयता नीतिमा खुलासा गर्ने कुन निर्णयको निर्णय गर्दा एक वकीलसँग परामर्श सिफारिस गर्छौं।
हामी हाम्रो पसलमा चेकआउट प्रक्रियाको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्छौं।
हामी के सङ्कलन र भण्डार गर्छौँ
जब तपाइँ हाम्रो साइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, हामी ट्रयाक गर्नेछौं:
तपाईंले देख्नुभएका उत्पादनहरू: हामी यो प्रयोग गर्नेछौं, उदाहरणको लागि, तपाईले भर्खरै हेरेको उत्पादनहरू देखाउनुहुन्छ
स्थान, आईपी ठेगाना र ब्राउजर प्रकार: हामी यो उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेर जस्तै कर र शिपिंग अनुमान गर्दछौं
ढुवानी ठेगाना: हामी तपाईंलाई यो प्रविष्टि गर्न सोध्नेछौं ताकि हामी गर्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि, तपाईले अर्डर राख्नुभन्दा अगाडि अनुमानित शिपिंग, र तपाईलाई अर्डर पठाउनुहुनेछ!
हामी हाम्रो साइट ब्राउज गर्दा तपाईंको कार्ट सामग्रीको ट्रयाक राख्नको लागि कुकीहरू पनि प्रयोग गर्नेछौं।
नोट: तपाईं आफ्नो कुकिजी नीतिलाई थप विस्तार गर्न र यहाँबाट त्यस खण्डको लिङ्क गर्न चाहानुहुन्छ।
जब तपाईं हामीबाट खरिद गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई नाम, बिलिंग ठेगाना, सपिङ्ग ठेगाना, इ-मेल ठेगाना, फोन नम्बर, क्रेडिट कार्ड विवरण र प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड जस्तै जानकारी प्रदान गर्दछौं। हामी यो जानकारी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेछौं, जस्तै:
तपाईंको खाता र अर्डरको बारेमा तपाईंको जानकारी पठाउनुहोस्
तपाईंको अनुरोधहरूको जवाफ दिनुहोस्, फिर्ती र उजुरी सहित
भुक्तानी प्रक्रिया र धोखाधडी रोक्न
हाम्रो स्टोरको लागि आफ्नो खाता सेट अप गर्नुहोस्
हामीसँग कुनै कानूनी दायित्वहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस्, करहरू गणना गर्न जस्ता
हाम्रो पसल प्रसादलाई सुधार गर्नुहोस्
तपाईले मार्केटिङ सन्देशहरू पठाउनुभयो भने, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न रोज्नु हुन्छ भने
यदि तपाईंले खाता सिर्जना गर्नुभयो भने, हामी तपाईंको नाम, ठेगाना, इ-मेल र फोन नम्बर भण्डार गर्नेछौं, जुन भविष्यका अर्डरहरूको लागि चेकआउट पिल गर्न प्रयोग गरिनेछ।
हामी सामान्यतया तपाईंको बारेमा जानकारी भण्डारण गर्दछौं जबसम्म हामीले ती उद्देश्यका लागि जानकारी चाहिन्छ जुन हामी सङ्कलन गर्दछौं र यसको प्रयोग गर्दछौं, र हामी यसलाई कानुनी रूपमा जारी राख्न आवश्यक छौं। उदाहरणको लागि, हामी XXX वर्षको लागि कर र लेखा उद्देश्यका लागि अर्डर जानकारी भण्डारण गर्नेछौं। यसमा तपाईंको नाम, ईमेल ठेगाना र बिलिंग र ढुवानी ठेगानाहरू समावेश गर्दछ।
हामी टिप्पणीहरू वा टिप्पणीहरू भण्डार गर्नेछौं, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई छोड्न छनौट गर्नुहुन्छ।
हाम्रो टोलीमा कसलाई पहुँच छ
हाम्रो टोलीका सदस्यहरू तपाईंले हामीलाई उपलब्ध गराउने जानकारीमा पहुँच राख्नुभएको छ। उदाहरणका लागि, प्रशासक र शप प्रबन्धकहरूले पनि पहुँच गर्न सक्छन्:
आदेश खरिद गरिएको जस्तै अर्डर जानकारी, जब यो खरिद गरियो र कहाँ पठाइएको छ, र
ग्राहक जानकारी जस्तै तपाईको नाम, इ-मेल ठेगाना, र बिलिङ र ढुवानी जानकारी।
हाम्रो टीमका सदस्यहरूले आदेशहरू, रिफन्डहरू प्रशोधन गर्न र सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्नको लागि यस जानकारीको पहुँच छ।
अरू के साथ हामी के साझा गर्छौं
यस खण्डमा तपाईले डेटा को साझेदारी गर्दै हुनुहुन्छ र कुन उद्देश्यको लागि सूचीबद्ध गर्नुपर्छ। यसमा सामेल हुन सक्छ, तर सीमित छैन, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, भुक्तान गेटवे, ढुवानी प्रदायक, र तेस्रो पक्ष इम्बेड गर्दछ।
हामी तेस्रो पक्षसँग जानकारी साझा गर्दछौं जसले हामीलाई हाम्रो अर्डर प्रदान गर्न र सेवाहरू भण्डारण गर्न सहयोग गर्दछ; उदाहरणका लागि -
यस उपसभापतिमा तपाईले तपाईको स्टोरमा भुक्तानी लिनको लागि तेस्रो पार्टी भुक्तानी प्रोसेसर सूचीबद्ध गर्नैपर्छ किनकि यसले ग्राहक डेटा संकलन गर्न सक्छ। हामीले पेपाललाई उदाहरणको रूपमा समावेश गरेको छौँ, तर तपाईले यो हटाउनु पर्छ यदि तपाईं पेपैल प्रयोग गर्नुहुन्न भने।
हामी PayPal मार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्दछौँ। भुक्तानी प्रशोधन गर्दा, तपाईंको केहि डाटा PayPal मा पास गरिनेछ, भुक्तानी प्रक्रिया वा आवश्यक समर्थन सहित जानकारी, जस्तै कि खरीद कुल र बिलिङ जानकारी।
कृपया हेर्नुहोस् PayPal गोपनीयता नीति थप विवरणहरू लागि।
यस एक्सटेन्सन प्रयोग गरेर, तपाइँ व्यक्तिगत डेटा भण्डारण गर्न वा बाह्य सेवाको साथ डेटा साझा गर्न सक्नुहुनेछ। यो कसरी कार्य गर्दछ भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस्, समावेश गर्नुहोस् जुन तपाइँ आफ्नो गोपनीयता नीतिमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ Google वेब फन्टहरू (डिफल्ट) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा YouTube वा Vimeo स्लाइडर क्रांतिमा भिडियोहरू वा ध्वनि प्ले गर्दै हुनुहुन्छ, हामी सिफारिस गर्दछौं तपाईंको पाठिक गोपनीयता सन्देशमा तपाईंको गोपनीयता प्रहरीमा:
हाम्रो साइट YouTube बाट प्लगइनहरू प्रयोग गर्दछ, जुन Google द्वारा सञ्चालन गरिएको छ। पृष्ठहरु को संचालक YouTube LLC, 901 चेरी एव।, सैन ब्रूनो, CA 94066, USA।
यदि तपाईं हाम्रो यूट्यूब प्लगइन देखाउने हाम्रो पृष्ठहरू मध्ये एक भ्रमण गर्नुहुन्छ, युट्युब सर्भरसँग जडान स्थापना गरिएको छ। यहाँ यूट्यूब सर्भरले तपाईलाई कुन पृष्ठहरू भ्रमण गर्नुभएको बारेमा जानकारी दिएको छ।
यदि तपाईं आफ्नो यूट्यूब खातामा लग इन हुनुहुन्छ भने, YouTube ले तपाईंलाई आफ्नो ब्राउजिङ व्यवहारलाई तपाइँको व्यक्तिगत प्रोफाईलसँग सम्बद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ यसलाई तपाइँको YouTube खाताबाट लगिङ गरेर रोक्न सक्नुहुनेछ।
YouTube लाई हाम्रो वेबसाइट अपील गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले कलाको अधीन उचित साधन बनाउँछ।6(1) (च) DSGVO।
प्रयोगकर्ता डाटा सङ्कलन गर्ने बारे थप जानकारी YouTube को डेटा सुरक्षा घोषणामा पाउन सकिन्छ https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
हाम्रो वेबसाइटले Vimeo द्वारा प्रदान गरिएका सुविधाहरू प्रयोग गर्दछ भिडियो पोर्टल। यो सेवा Vimeo इंक, 555 वेस्ट 18th स्ट्रीट, न्यूयर्क, न्यूयर्क 10011, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान गरिएको छ।
यदि तपाईं हाम्रो कुनै एक पृष्ठमा Vimeo प्लगइन विशेषता देखाउनुहुन्छ, Vimeo सर्भरसँग जडान स्थापना गरिएको छ। यहाँ Vimeo सर्भरले जानकारी दिएको छ कि हामी कुन पृष्ठहरू भ्रमण गरेका छौं। यसको अतिरिक्त, Vimeo ले तपाईंको आईपी ठेगाना प्राप्त गर्नेछ। यो तपाइँले हाम्रो प्लगइन भ्रमण गर्नुहुने वा Vimeo खाता छैन जब तपाईं Vimeo मा लग इन हुनुहुन्न भने पनि लागू हुन्छ। जानकारी अमेरिकामा Vimeo सर्भरमा पठाइएको छ, जहाँ भण्डारण गरिएको छ।
यदि तपाईं आफ्नो Vimeo खातामा लग इन हुनुहुन्छ भने, Vimeo ले तपाईंलाई आफ्नो ब्राउजिङ व्यवहारलाई तपाइँको व्यक्तिगत प्रोफाईलसँग सम्बद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईले तपाइँको Vimeo खाताबाट लगिङ गरेर यसलाई रोक्न सक्नुहुनेछ।
प्रयोगकर्ता डाटा कसरी गर्ने भन्ने बारे थप जानकारीको लागि कृपया कृपया Vimeo गोपनीयता नीतिलाई हेर्नुहोस् https://vimeo.com/privacy.
Google वेब फन्टहरू
फन्टहरूको समानता प्रतिनिधित्वका लागि, यो पृष्ठले Google द्वारा उपलब्ध वेब फन्टहरू प्रयोग गर्दछ। जब तपाइँ एक पृष्ठ खोल्नुहुन्छ, तपाईको ब्राउजरले आवश्यक वेब फन्टहरूलाई तपाईको ब्राउजर क्यासमा लोड गर्नका लागि पाठ र फन्टहरू सही रूपमा लोड गर्दछ।
यस उद्देश्यका लागि तपाईको ब्राउजरले Google सर्भरमा सिधा जडान स्थापना गरेको छ। Google यसरी जान्छ कि हाम्रो वेब पेज तपाईंको IP ठेगाना मार्फत पहुँच भएको थियो। Google वेब फन्टहरूको प्रयोग हाम्रो प्लगइनको समान र आकर्षक प्रस्तुतिको रुचिमा गरिन्छ। यसले कलाको अधीन उचित साधन बनाउँछ।6(1) (च) DSGVO।
यदि तपाईंको ब्राउजरले वेब फन्टहरू समर्थन गर्दैन भने तपाईंको मानक द्वारा एक मानक फन्ट प्रयोग गरिन्छ।
प्रयोगकर्ता डेटा सङ्कलन गर्ने बारेमा थप जानकारी, फेला पार्न सकिन्छ https://developers.google.com/fonts/faq र Google को गोपनीयता नीतिमा https://www.google.com/policies/privacy/.
हाम्रो पृष्ठ मा, सामाजिक सञ्जाल SoundCloud को प्लगइन (SoundCloud लिमिटेड, Berners हाउस, 47-48 Berners सडक, लन्डन W1T 3NF, बेलायत) एकीकृत गर्न सकिन्छ। को SoundCloud प्लगइन हाम्रो साइट मा SoundCloud लोगो द्वारा मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जब तपाइँ हाम्रो साइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईंको ब्राउजर र SoundCloud सर्भर बीच प्रत्यक्ष सीधा जडान प्लगइन मार्फत स्थापना गरिएको छ। यसले SoundCloud लाई तपाइँलाई हाम्रो साइटबाट तपाइँको आईपी ठेगानाबाट भ्रमण गरेको जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाई "Sound" वा "शेयर" बटनहरूमा क्लिक गर्नुहुँदा तपाईंको SoundCloud खातामा लग इन गर्दा, तपाइँ हाम्रो पृष्ठहरूको सामग्री तपाइँको SoundCloud प्रोफाइलमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ ध्वनि क्लाउडले तपाईंको प्रयोगकर्ता खाताको साथ हाम्रो पृष्ठहरूमा भेट्न सक्दछ। हामी यो प्वाइन्ट गर्न चाहानुहुन्छ, यी पृष्ठहरूको प्रदायकको रूपमा, हामीलेसँग संचारित सामग्रीको सामग्रीको बारेमा थाहा छैन वा कसरी यो कसरी SoundCloud द्वारा प्रयोग गरिनेछ। SoundCloud को गोपनीयता नीतिको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया https://soundcloud.com/pages/privacy मा जानुहोस्।
यदि तपाईं SoundCloud आफ्नो SoundCloud खाता संग हाम्रो साइट को सम्बद्ध गर्न चाहते नहीं चाहते हो, कृपया आफ्नो SoundCloud खाता मा लग यिनी गर्नुहोस।